Yesu Frɛɛ Asuafo Bi sɛ Wɔmmɛyɛ ‘Nnipa Yifo’ | Yesu Asetena
YESU FRƐƐ ASUAFO BI SƐ WƆNNYA BIRIBIARA HƆ MMƐDI N’AKYI
MPATAAYIFO BƐYƐƐ NNIPA YIFO
Bere a Nasaretfo yɛɛ sɛ wɔrekum Yesu a anyɛ yie no, Yesu fii hɔ kɔɔ Kapernaum. Ɛhɔ bɛn Galilea Po a na wɔsan frɛ no “Genesaret tadeɛ” no. (Luka 5:1) Ɛno maa Yesaia nwoma no mu nkɔmhyɛ bi baa mu. Saa nkɔmhyɛ no kaa sɛ nnipa a wɔte Galilea no bɛhu hann kɛse bi.​—Yesaia 9:​1, 2.
Bere a Yesu kɔɔ Galilea no, ɛhɔ nso, asɛm a ɔde too dwa ne sɛ: “Ɔsoro ahennie no abɛn.” (Mateo 4:​17) Yesu ne n’asuafo bi na ɛtuu kwan kɔɔ Yudea, nanso wɔsan baa Galilea no, asuafo no san kɔtoaa wɔn mpataayi adwuma no so. Yesu nam ara na ɔkɔpuee wɔn so. (Yohane 1:​35-​42) Afei deɛ na bere aso sɛ wɔdi Yesu akyi kɔ baabiara a ɔbɛkɔ. Ná ɛno bɛma Yesu atumi akyerɛ wɔn asɛnka adwuma no ani so yie na sɛ ɔkɔ a wɔatoa so.
Bere a Yesu nam mpoano hɔ no, ɔhuu Simon Petro ne ne nua Andrea ne wɔn namfonom sɛ wɔresiesie wɔn asau. Yesu kɔɔ wɔn nkyɛn. Ɔduu hɔ no, ɔforoo Petro korow no, na ɔka kyerɛɛ no sɛ ɔnhare nkɔ po no mu kakra. Afei, Yesu tenaa ase, na ɔfirii ase sɛ ɔrekyerɛkyerɛ nnipakuw a wɔahyia wɔ hɔ no. Yesu kyerɛkyerɛ wɔn Ahenni no ho nokwasɛm.
Yesu kasa wiei no ɔka kyerɛ Petro sɛ: “Pia kɔ deɛ ɛhɔ dɔ, na mongu mo asau no mfa nyi nam.” Petro kaa sɛ: “Ɔkyerɛkyerɛfoɔ, yɛayɛ adwuma anadwo mũ nyinaa na yɛannya hwee, nanso w’ano asɛm nti mɛgu asau no.”​—Luka 5:​4, 5.
Wɔguu asau no, mpataa a wɔkyeree deɛ, ɛnyɛ agorɔ; na ɛdɔɔso paa. Anka asau no koraa reyɛ atete! Ɛhɔ ara na wɔfrɛɛ wɔn nnamfo bi a wɔwɔ korow foforo mu sɛ wɔmmɛboa wɔn. Akorow mmienu no nyinaa yɛɛ ma, na ɛfirii ase sɛ ɛremem. Bere a Petro huu saa no, ɔkotoo Yesu nan ase kaa sɛ: “Awurade, firi me nkyɛn kɔ, na meyɛ ɔdebɔneyɛfoɔ.” Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Nsuro. Ɛfiri saa berɛ yi rekorɔ no wobɛyi nnipa.”​—Luka 5:​8, 10.
Yesu ka kyerɛɛ Petro ne Andrea sɛ: “Mommɛdi m’akyi, na mɛma moayɛ nnipa yifoɔ.” (Mateo 4:​19) Ɔsan frɛɛ mpataayifo mmienu kaa ho. Wɔn ne Sebedeo mma Yakobo ne Yohane. Wɔn nso antwentwɛn wɔn nan ase koraa na wɔdii n’akyi. Ná nnipa nnan yi nyinaa yɛ mpataayifo, nanso wɔgyaee wɔn adwuma no bɛyɛɛ Yesu asuafo. Wɔn ne nnipa a wɔdi kan a wɔgyaa biribiara hɔ bɛdii Yesu akyi.
Hwannom na Yesu frɛɛ wɔn ma wɔgyaa biribiara hɔ bɛdii n’akyi? Adwuma bɛn na na wɔyɛ?
Anwonwade bɛn na ɛmaa Petro koma tui?
Ná asuafo nnan no bɛgyae mpataa no yi akɔyi dɛn?
Petro Bɔɔ Mmɔden Dii Ehu ne N’adwene a na Ehinhim So
Sɛ obi adwene hinhim a, ebetumi adi no awu paa. Nanso, Petro tumi dii ehu ne n’adwene a na ehinhim wɔ Yesu akyi a na obedi no so.